Ihe ndị na-akpali mmasị banyere eziokwu Scams na aghụghọ
Ntaneti na scams nwere ike ime n'oge ọ bụla. Onye ọ bụla na-eji ịntanetị eme ihe.Ya mere, ọ dị mkpa ịmara otú internet si arụ ọrụ nke na ndị ọrụ weebụ, ndị mmepe na ndị nwe ụlọ nwere ike ichebe ha siri ike-enwetaego.
Alexander Peresunko, nke Ọkachamara Njikwa Ihe Nlekọta Ndị Ahịa, akọwapụtara n'isiokwu a na-emekarị aghụghọ na ngbochi nke enwere ike izute ma ntanetị na offline.
Iji malite na, izu ohi njirimara na-egosi ojiji nke ozi onye ọzọdị ka nọmba mkpuchi mmadụ, nwa agbọghọ ma ọ bụ nne na aha ya ime mpụ. Ndị ọrụ Intanet kwesịrị ịma na iji njirimara ndị ọzọdị oke iwu na-akwadoghị dị ka ekwuru na January 2010.
Nke abuo, njide aghọọ aka na-ezo aka n'iji onye ọzọ amata (mandị nwụrụ anwụ ma ọ bụ na-ebi ndụ) ma ọ bụ ọbụna jiri njirimara adịgboroja site n'aka ndị aghụghọ. Dịka ọmụmaatụ, itinye akwụkwọ kaadị visa n'aha onye nwụrụ anwụ. Ịntanetịndị fraudsters na-ele anya maka ozi onwe onye dịka aha njirimara ma ọ bụ okwuntughe, ụbọchị ọmụmụ, adreesị zuru ezu, nọmba mkpuchi mmekọrịta na aha zuru ezu makaụlọ akụ na ego dị ka ozi kaadị akwụmụgwọ, ọrụ ntanetị na ịdenye aha ya na ebumnuche nke ime mpụ internet.
Ụdị ụdị nke atọ nke ịntanetị na-emetụta kaadị akwụmụgwọ na ego debit. Debit kaadịntanetị ịntanetị na-eme mgbe onye omempụ na-ehichapụ ozi kaadị site na ya ma ọ bụ akara ka ịmepụta kaadị ahụ..Ọ na-egbu yaeji igwe "skimming" na-enyocha azụ nke kaadị akwụmụgwọ / debit ma were ihe dị mkpa (dịka ọmụmaatụ, nọmba akaụntụ na akaụntụaha) ma na-emeghị kọntaktị ọ bụla na kaadị ahụ. N'okwu ndị dị oke njọ, otu igwe ahụ nwere ike ịgụ pin nke otu kaadị.
Na-esote, phishing, nke a makwaara dị ka ịkwanye ihe ejiji bụ ọnyà aghụghọ nke gụnyereedepụta ozi ederede, ebe nrụọrụ weebụ, na ozi ịntanetị site na ndị omempụ na-ahụ maka ịntanetị dị ka à ga - asị na ha sitere na mmalite nke iwu. A na-eji ozi anchịkọta nlezianya, nkọwa nke onye na ego banyere onye ọrụ. Ozi ederede ma ọ bụ ozi ịntanetị ga-ebute mmeghachi omume site naonye ọrụ ịntanetị. Na nke a, ọdịnaya nwere ike iji ụda nke chọrọ nzaghachi ngwa ngwa, ozi ma ọ bụ iwe iwe ma ọ bụ ojiji nkeokwu ụgha ma obu ozi. Ihe odide phishing anaghị emekarị.
Ọganihu ị na-enweta n'ọdịnihu bụ nsụgharị weebụ nke ụfọdụ ndị ọrụ na-eji na-enye mgbazinye egonye mmadụ n'otu n'otu. Ebumnuche ndị bụ isi bụ ndị nwere ụgwọ ọjọọ ma ọ bụ ndị na-erughị eru maka ụlọ ọrụ / ụlọ akụ mgbazinye ego. Ha na-eji ahịrịokwu dịka"Enweghi ọkwa ego?" ma ọ bụ "Nwere akụkọ ọjọọ na akụkọ ihe mere eme?" Ozugbo onye ọrụ ịntanetị na-arụ ọrụ, ndị omempụ na-amalite usoro aghụghọna-arịọ maka ego ị ga-enweta iji nweta ego. Mgbe ha nwetasịrị ego ahụ, ndị na-agba chaa chaa na-apụ n'anya.
Ịgba chaa (ma ọ bụ nkedo a na-agbata n'ọsọ) na-ezo aka na ọnụọgụ ahịa ọnụọgụ ahịa nke ahịa ebe ndị merụrụ ahụnata ozi-e site na ozi-e, ekwentị ma ọ bụ ozi na-egosi mmeri ma ọ bụ onyinye. Ka o sina dị, tupu ịnakọta onyinye ma ọ bụ ego,achọrọ onye ahụ a chọrọ ka ọ kwụọ ụgwọ ụtụ isi maọbụ ego tupu oge eruo. Ozugbo onye ahụ gbaghaara ya ego ahụ, nzukọ ga-apụ n'anya ma ọ bụ rịọ maka yaego ka ukwuu. N'ebe a, a na-eme ka ọha na eze mara na otutu lotrị ma ọ bụ akara n'ọchịchị na Canada anaghị edozi ụgwọ ma ọ bụ ụtụ.Tụkwasị na nke a, dịka ihe nlezianya, ndị na-ahụ maka ịntanetị na-agba ume ka ha nyochaa lotteries, na-adọta ma ọ bụ na-asọ asọ Source .